Gịnị bụ Epistane?
Youchọrọ iwere arụmọrụ mgbatị gị na ọkwa ọzọ? Kedu maka ịmeghe anụ ọhịa mgbatị zoro ezo n'ime gị nke na-echere iwepụta A-egwuregwu? Họrọ Epistane nke nwere ikike ịbawanye ụba ọkpụkpụ, ịda ụda akwara, arụmọrụ, na uru ike. A na-enwekwa mmasị na ya na ụwa nke ịkpụ ahụ maka ikike ya iji melite ngwongwo ahụ ma belata abụba ahụ dịka obere izu 8-12.
Uru Alfa Labs Epistane
Akọrọ, uru dị ala karịa oke mmadụ
Akwara na ike bara uru dị mkpa
Enweghị njigide mmiri ma ọ bụ bloating
Na-eme ka ahụ ike sie ike
Na-akpali ọnwụ abụba
Mmetụta na-eme ka ahụ sie ike
Ọkpụkpụ ngwa ngwa na mgbatị ọkpụkpụ
Mee ka izugbe na ọdịmma zuru oke
Oge ngwụcha mgbatị mgbatị
Ezigbo maka igbutu, recomposition, ma ọ bụ bulking cycles
Etu esi eji Epistane?
A na-eji Epistane mee ihe na mgbatị nke izu 4-8 site na ụmụ nwoke na oge izu nke 4-6 site na ụmụ nwanyị n'agbanyeghị na nke a nwere ike ịdị iche dabere na mmasị mmadụ na usoro okirikiri.
Thekpụrụ Epistane nke akwadoro maka ụmụ nwoke bụ capsules 2-3 kwa ụbọchị, ọkacha mma na nri ma were nkeji 30-45 tupu oge mgbatị ahụ.
Ngwadogwu Epistane nke akwadoro maka ụmụ nwanyị bụ 1-2 capsules kwa ụbọchị, ọkacha mma na nri wee were nkeji 30-45 tupu oge mgbatị ahụ.
Ọkara ndụ Epistane bụ 2 ruo 3 awa.
Epistane kachasị mma Arimistane, Trenavar, na M-Sten.
Epistane na-egosipụta nrụpụta ọrụ iji nyere ndị na-anụ ahụ ike aka, ndị na-agba ịnyịnya ígwè, ndị na-egwu mmiri, ndị na-arụ ọrụ ahụ na ndị na-arụ ọrụ ike ka ha rụọ ọrụ siri ike karị, na-agba ọsọ ngwa ngwa, na-arịgo elu, na-arụ ọrụ mgbatị na-arụpụta na-enweghị ahụmịhe nke ihe ịrịba ama nke ike ọgwụgwụ.
N'ụwa nke taa asọmpi na nrụgide siri ike, oke ibu na nsogbu ahụike bụ isi okwu ahụike. Na Epistane, ị nwere ike ịnọsọ ọsọ ma nọrọ jụụ n ’ụdị kachasị mma ma tufuo abụba afọ na ume visceral Ọ na - enyere gị aka ịmekwu akwara nke, n'aka nke ya, na - akpali abụba anụ ahụ karịa.
Epistane mekwara ka njigide nitrogen dị na ahụ dị mkpa maka iwulite anụ ahụ ike. Ntọala njigide nitrogen na-abawanye uru bara uru iji mee ka usoro ahụ ike.
Epistane na-enye ndị ọrụ ohere ịchekwa ma jigide ọtụtụ uru sitere na usoro nrụpụta ahụ ha.
Anyị na-akwado itinye Bodybuilt Labs SARM Cycle Nkwado 90 Capsules na SARM ọ bụla ma ọ bụ usoro mgbanwe. Nkwado okirikiri ga-ebuli nsonaazụ ahụ ma nye gị ihe ndị ahụ gị chọrọ n'oge ọzụzụ na ozuzu zuru oke.
SARfọdụ SARMS ma ọ bụ ndụmọdụ nwere ike ịkwụsị nwa oge testosterone. Ọ dị mkpa mgbe ị gachara, ị ga-eweghachi testosterone gị sitere na 100% iji chekwaa nsonaazụ gị sitere na okirikiri gị. Ezubere PCT anyị kpọmkwem maka SARMS ma hụ na ị ga-enwetakwa uru gị niile. Bodybuilt Labs SARMS PCT 90 Capsules
Maka ndụmọdụ maka ihe SARMS ziri ezi maka gị, lelee nke anyị Ntuziaka SARMS.
Biko Rịba ama: Anyị na-ebu ụgbọ mmiri n'ụwa niile. N'ihi iwu dịgasị iche iche mba na mba ọzọ, anyị na-ere SARMS naanị maka ebumnuche nyocha.